Warar been abuur ah? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxay umuuqataa inaan akhrino warar been abuur ah meelkasta oo aan eegno maalmahan. Jiilka da 'yarta ah ee ku koray internetka, “wararka beenta ah” maahan wax la yaab leh, laakiin waxay u yihiin ilmaha sida aniga oo kale ah! Waxaan ku soo koray xaqiiqda ah in runta loo aaminay suxufiyadda shaqo ahaan muddo tobanaan sano ah. Fikradda ah in aysan jirin war been abuur ah oo keliya, laakiin in si ula kac ah loogu baaraandego qaab ay umuuqato mid la isku halleyn karo waa wax yar oo naxdin leh.
Waxa kale oo jira waxyaabo ka soo horjeeda wararka beenta ah - war wanaagsan. Dabcan, isla markiiba waxaan ka fikiray mid ka mid ah warka wanaagsan ee ugu muhiimsan: warka wanaagsan, injiilka Ciise Masiix. "Markii Yooxanaa la soo dejiyey, Ciise wuxuu yimid Galili oo uu ku wacdiyey injiilka Ilaah" (Mk 1,14:XNUMX).
Anagoo ah raacayaasha Masiixiyiinta, waxaan maqalnaa injiilka marar badan oo mararka qaar aan u muuqanno inaan iska ilownay waxyeelooyinkiisii. Warkan wanaagsan waxaa lagu sharaxay Injiilka sida ku xusan Matthew sida soo socota: «Dadkii fadhiyey gudcurka waxay arkeen iftiin weyn; iyo kuwii fadhiyey dhulka iyo hadhka dhimashadaba, laambad baa soo kacday (Mt 4,16:XNUMX).
Ka fikir daqiiqad. Kuwa aan maqlin warka wanaagsan ee nolosha Masiixa, dhimashada iyo sarakicidda waxay ku nool yihiin dhulka geerida ama hooska dhimashada. Way ka sii xumaan kari wayday! Laakiin warka wanaagsan ee ka imanaya Ciise ayaa ah in xukunkan dilka ah kor loo qaaday - waxaa jira nolol cusub oo ah xiriir soo celinta Ilaah lala yeeshay xagga Ciise xagga Eraygiisa iyo Ruuxiisa. Kaliya maaha maalin dheeri ah, toddobaad, ama xitaa sannad. Weligiis iyo weligiisba! Siduu Ciise laftiisu yidhi: «Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kan i rumaysta wuu noolaan doonaa, in kastoo uu isla dhinto. Kii kasta oo nool oo i rumaystaa weligii ma dhiman doono. Ma u malaynaysaa sidaas? » (Yooxanaa 11,25: 26-XNUMX).
Taasi waa sababta injiilka loogu sharaxay war wanaagsan: macno ahaan macnaheedu waa nolosha! Adduunyo halka “wararka beenta ah” ay yihiin wax laga walwalo, injiilka boqortooyada Ilaah waa war wanaagsan oo ku siinaya rajo iyo kalsooni, waxaadna ku kalsoonaan kartaa kalsooni.